6 hombe-zita rezita rekugadzirisa muna Chivabvu. | Zvazvino Zvinyorwa
Mayo. Yakazara chitubu. Iwe unoda kuenda kunze mune yakanaka mamiriro ekunze uye uwane kona iyo zvakare yakanaka kuverenga. Uye mumwezve mwedzi ipapo dzakawanda nhau dzekunyora. Izvi ndizvo 6 yakasarudzwa kunyanya kubva mutema mhando. Iyo nyowani ye Victor weMuti, nhoroondo munzira Slav Galán kana mudzidzisi weItaly Camillery vanoratidzira pakati pemazano.
1 Kukundwa kweAmerica kwakaudza vasina chokwadi - Juan Eslava Galán
2 Asati makore anotyisa - Victor del Arbol
3 Wechishanu Akakuvara - JD Barker
4 Tolkien neHondo Huru - Kwakatangira Pakati-pasi - John Garth
5 Kana uyu ari mukadzi - Lorenzo Silva naNoemí Trujillo
6 Opera yaVigàta - Andrea Camilleri
Kukundwa kweAmerica kwakaudzwa kune vasina chokwadi - Juan Eslava Galán
Eslava Galán anotiunzira a dhirivhari nyowani yemabhuku ake enhau anonakidza akataurwa nenzira yake yenguva dzose iyo yakawana mashoma mashoma evaverengi vakavimbika. Ino nguva inotitora isu kuenda ku kukunda America uye anotiudza iyo hupenyu hunonakidza hwevatambi uyo ane nyeredzi mariri. Uye nguva dzose "kune vanokakavara."
Asati makore anotyisa - Victor weMuti
Victor weMuti anodhonza zviuru zvevateveri vasina mamiriro yatove kwenguva yakareba. Iine inoshamisa trajectory uye a maitiro asina kufananidzwa, yakaitwa ine mukurumbira wakakodzera-kukodzera. Zvino dzoka nenyaya itsva iyi.
Mariri anotiudza hupenyu hwaIsaya, uyo akatanga pamusoro pezuva raakasvika muBarcelona achiri mudiki uye akasiya zvakapfuura kumashure. Iye anogara nemumwe wake uye anoedza kupaza nepakati bhasikoro kudzoresa bhizinesi. Asi zvese zvinoshanduka paunogamuchira iyo kushanya kubva kune wekare waunozivana naye. Izvi zvinokurudzira iwe kuti udzokere ku Uganda uye kutora chikamu mumusangano wekuyananiswa kwenyika. Uye izvo zvakapfuura izvo Isaya zvaakafunga kuti akanganwa zvichadzoka.
Wechishanu akabatwa - JD Barker
JD Barker anodzoka na iyo inotevera kune Tsoko yechina, rimwe zita rakakurumbira renhau dzichangoburwa dzematsotsi. Tora mavara kubva mubhuku rekutanga, Porter nechikwata chake, iyo yakabviswa neFBI kubva kumhosva yaAnson Bishop yavakaferefeta. Asi munguva pfupi ivo vanotarisana nevamwe umhondi hutsva hutsva, ino nguva yevakadzi. Nekudaro, Porter anotevera iyo anson nzira muchivande uye kana vakuru vake vazviziva, vanomumisa. Zvisinei, Porter achamutevera pasi kuna amai vake.
Tolkien uye Hondo Huru - Kwakatangira Pakati-pasi - John Garth
Munyori webhuku rino anotiudza maitiro aakaita mubasa raTolkien rake chiitiko chekurwa muHondo Yenyika I paigadzira nekuumba, semuenzaniso, Middle Earth. Mudiki Tolkien akapinda mu hondo yesmeme, maakarasa dzinenge shamwari dzake dzese dzepedyo. Uye Garth anoshandisa iyo tsamba dzisina kunyorwa yeTolkien uye shamwari idzodzo kuti vadzorezve izvo zvakasikwa.
Kana uyu ari mukadzi - Lorenzo Silva naNoemí Trujillo
Para kupera kwaMay iyo mutsara mutsva wemapurisa iyo inotanga Lorenzo Silva naNoemí Trujillo. Uye zvinoenderana nezvazoita zvemafashoni mumhando yacho, nyeredzi mukadzi.
Ndezve muongorori wekuuraya Manuela Mauri, anga agara kwemwedzi minomwe paakashanyirwa naOfficer Guadalupe Larbi kumukumbira kuti adzokere kubasa. Mauri ndiye rakasiyana nemasimba nesimba zvakafanira kuita kuongorora kwakaomarara kuti iyo Provincial Brigade yeMatare Ekutonga eMadrid yakaomeswa.
Vakawanikwa zvisaririra zvevanhu mune mbiri dzekurasa nzvimbo muPinto neValdemingómez, asi kwete chitunha chose uye hapana zvakare huzivi hwekunyora kwemhosva. Asi zvave zvakare mwedzi mitatu uye szvakadaro pasina kuziva kuti ndiani akabatwa.
Opera yaVigàta - Andrea Camilleri
Inodzorera iyo Italian mhosva inoverengeka tenzi uye musiki weiye mukuru muchengeti Montalbano na a zvetsika tragicomedy yakaiswa muSicily ye zana remakore XIX.
Nyaya inoitika husiku hwe 1875 riinhi inotanga muguta reSicilian re vigàta iyo itsva Mambo weItaly theatre. Ichamiririra a mediocre uye isingazivikanwe opera mutungamiriri weguta, Eugenio Bortuzzi, yakwanisa kuronga kunyangwe kupokana kwevagari vese. Njodzi inotanga kana iyo soprano inodanidzira uye munhu wese anovhunduka. Kubva ipapo iyo unyengeri, umhondi nemhirizhonga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 6 hombe-zita rezita rekugadzirisa muna Chivabvu